Development Projects Sector – Myanmar Independent Living Initiative (MILI)
မြန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများရှေ့ဆောင်အဖွဲ့ စလင်းနယ� ...
မြန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများရှေ့ဆောင်အဖွဲ့က အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည့် စီမံချက်များ၏ နှစ်လယ် သုံးသပ်ခြင်း အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်
မြန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများရှေ့ဆောင်အဖွဲ့က အကောင်� ...
မသန်စွမ်းမှုနှင့် မီဒီယာသင်တန်း လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း
မသန်စွမ်းသူများနှင့် မသန်စွမ်းအရေးစိတ်ပါဝင်စားသူမျ� ...
မသန်စွမ်းအမျိုးသမီးများနှင့် ၎င်းတို့၏မိသားစုဝင်အမျိုးသမီးများအတွက် အခြေခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်း အမြင်ဖွင့် သင်တန်း၊ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ထူထောင်ရန်အတွက် စိတ်ကူးအကြံဉာဏ် ဖော်ထုတ်ခြင်းသင်တန်းနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း စတင် တည်ထောင်ခြင်း သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ပို့ချ
Australian Volunteers for International Development (AVI) ၏ ပံ့ပိုးမှုဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမသ ...
မြန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများရှေ့ဆောင်အဖွဲ့နှင့် နယ်ရုံးခွဲ၏ စီမံချက်လုပ်ငန်းများ၊ လှုပ်ရှားမှုများ၊ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများကို The NIPPON Foundation မှ လာရောက် လေ့လာ
The NIPPON Foundation မှ Project Coordinator Mr.Toru Koike သည် မြန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူမ� ...
မြန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများရှေ့ဆောင်အဖွဲ့သည် MAM Project ...
Conduct Organizational Capacity Assessment Workshop
မြန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများရှေ့ဆောင်အဖွဲ့မှ ၀န်ထမ� ...
မြန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများရှေ့ဆောင်အဖွဲ့မှ ၀န်ထ� ...
Conduct Leadership, Planning and Management Skills Training
အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည် လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်
မြန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများရှေ့ဆောင်အဖွဲ့ (ရုံးချုပ်)နှင့် နယ်ရုံးခွဲများ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်
မြန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများရှေ့ဆောင်အဖွဲ့ (ရုံးချုပ်)နှင့် နယ်ရုံးခွဲများ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်
မြန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများရှေ့ဆောင်အဖွဲ့ ၀န်ထမ်း� ...
Making PWDs Agents of Change Through MILI (MAM) စီမံကိန်း၏ http://mili.org.mm/wp-admin/post-new.php#tab-my စီမံကိန်းမိတ်ဆက် အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ
မြန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများရှေ့ဆောင်အဖွဲ့က The NIPPON Foundatio ...
မြန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများရှေ့ဆောင်အဖွဲ့တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အလုပ်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း
Strategic Plan TOT သင်တန်းဖွင့်လှစ်ပို့ချ
မြန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများရှေ့ဆောင်အဖွဲ့ရှိ ၀န်ထ� ...
မြန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများရှေ့ဆောင်အဖွဲ့တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အလုပ်လျှောက်လွှာ ခေါ်ယူခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများရှေ့ဆောင်အဖွဲ့တွင် ပူး� ...
မသန်စွမ်းသူများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများအတွက် အရေးဆိုတင်ပြခြင်းဆိုင်ရာ ဆရာဖြစ် သင်တန်းဖွင့်လှစ်ပို့ချ
နယ်သာလန်သံရုံး၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသန်� ...
မြန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများရှေ့ဆောင်အဖွဲ့၏ MAM project လု� ...
မြန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများရှေ့ဆောင်အဖွဲ့၏ MAM Project လု ...
မသန်စွမ်းသူများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများအတွက် အရေးဆိုတင်ပြခြင်းဆိုင်ရာ ဆရာဖြစ်သင်တန်း (တတိယအပတ်စဉ်) လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း
Disability and Media သင်တန်းဖွင့်လှစ်ပို့ချ
မသန်စွမ်းအရေး လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများတွင် မီဒီယာမျာ� ...
မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာ ဆရာဖြစ်သင်တန်း ဖွင့်လှစ်ပို့ချ
မြန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများ ရှေ့ဆောင်အဖွဲ့ နယ်ရုံး� ...
မသန်စွမ်းသူများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများအတွက် အရေးဆိုတင်ပြခြင်းဆိုင်ရာ ဆရာဖြစ်သင်တန်း လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း
Advocacy for Change: Promoting the Rights and Inclusion of People with Disability in Myanmar – APPM စီမံကိန်း၏ စီမံကိန်းမိတ်ဆက် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ
မြန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများရှေ့ဆောင်အဖွဲ့က နယ်သာလ� ...
မြန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများရှေ့ဆောင်အဖွဲ့တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အလုပ်လျှောက်လွှာ ခေါ်ယူခြင်း
Conduct Assistive Device Training
Assistive Device Training for 28 MILI branches was successfully conducted from 12.3.2018 to 13.3.2018 for two days at MILI training hall. Training was ...